Onyankopɔn Yi Ne Dɔ Kyerɛ Yɛn
Ɔwɛn-Aban—Nea Adesua Nsɛm Wom | June 2011
KENKAN WƆ Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian (West) Bicol Cambodian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chuukese Colombian Sign Language Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Indonesian Italian Japanese Kikongo Kiluba Kimbundu Kirghiz Kongo Korean Korean Sign Language Latvian Lithuanian Luo Malagasy Malayalam Maya Mixe (North Central) Mizo Moore Myanmar Ndebele Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Ponapean Portuguese Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Rarotongan Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tatar Tetun Dili Thai Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Wolaita Yapese Zande
‘Adom nam trenee so bedi hene akɔ daa nkwa mu.’—ROM. 5:21.
1, 2. Akyɛde abien bɛn na yebetumi asusuw ho, na nea ɛwɔ he na ɛkyɛn so?
ƆBENFO bi kae sɛ: “Agyapade a ɛsen biara a na Romafo de gyaw . . . wɔn nkyirimma [yɛ] wɔn mmara ne adwene a na wɔwɔ sɛ ɛsɛ sɛ nnipa di mmara so wɔ wɔn asetena mu no.” (Ɔbenfo David J. Williams a ɔwɔ Melbourne Sukuupɔn a ɛwɔ Australia) Ɛmfa ho sɛnea na saa agyapade no di mũ no, agyapade anaa akyɛde bi wɔ hɔ a edi mũ sen ɛno koraa. Saa akyɛde yi yɛ ade a Onyankopɔn nam so ma yenya gyinabea a ɛteɛ na ɛyɛ papa wɔ n’ani so, na ɛma yenya nkwagye ne daa nkwa ho anidaso.
2 Onyankopɔn gyinaa n’atɛntrenee so na ɔde saa akyɛde yi mae. Ɔsomafo Paulo anka mmara ho asɛm ankɔ akyiri amfa ankyerɛkyerɛ saa nsɛm yi mu wɔ Romafo ti 5. Mmom no, ɔde asɛm a ɛyɛ anigye na ɛma yenya awerɛhyem yi na efii ase sɛ: “Wofi gyidi mu abu yɛn bem, [enti] momma yɛne Onyankopɔn nnya asomdwoe denam yɛn Awurade Yesu Kristo so.” Onyankopɔn akyɛde no kanyan wɔn a wonya bi no ma wɔn nso dɔ no bi. Ná Paulo yɛ wɔn mu biako. Ɔkyerɛwee sɛ: “Wɔnam honhom kronkron a wɔde ama yɛn no so ahwie Onyankopɔn dɔ agu yɛn koma mu.”—Rom. 5:1, 5.
3. Nsɛmmisa bɛn na ɛsɔre?
3 Nanso, dɛn nti na na saa akyɛde a wofi ɔdɔ mu de ma no ho hia? Ná Onyankopɔn bɛyɛ dɛn atumi de n’akyɛde no ama wɔ ɔkwan a ɛteɛ so na ama nnipa nyinaa anya so mfaso? Na dɛn na ɛsɛ sɛ ankorankoro yɛ na ama wɔafata sɛ wonya bi? Ma yɛnhwehwɛ nsɛmmisa yi ho mmuae a ɛtɔ asom, na yɛnhwɛ sɛnea ɛma yehu Onyankopɔn dɔ.
Onyankopɔn Dɔ ne Bɔne
4, 5. (a) Ɔkwan a ɛkyɛn so bɛn na Yehowa faa so daa ne dɔ adi? (b) Dɛn na sɛ yehu a, ebetumi aboa yɛn ma yɛate asɛm a ɛwɔ Romafo 5:12 no ase?
4 Yehowa daa ɔdɔ a ɛkyɛn so adi somaa ne Ba a ɔwoo no koro no sɛ ɔmmɛboa nnipa. Paulo kyerɛkyerɛɛ mu wɔ saa kwan yi so sɛ: “Onyankopɔn yi ne dɔ a ɔdɔ yɛn no kyerɛ, efisɛ yɛda so yɛ nnebɔneyɛfo no, Kristo wu maa yɛn.” (Rom. 5:8) Susuw nokwasɛm biako a ɔdaa no adi wɔ saa asɛm yi mu ho hwɛ. Ɔkae sɛ: “Yɛda so yɛ nnebɔneyɛfo no.” Ɛho hia sɛ nnipa nyinaa hu nea ɛyɛe a yɛbɛyɛɛ nnebɔneyɛfo.
5 Paulo kyerɛkyerɛɛ asɛm no mu, na ɔde asɛm yi na efii ase sɛ: “Ɛnam onipa biako so na bɔne baa wiase, na owu nam bɔne so bae, ma owu trɛw kaa nnipa nyinaa, efisɛ wɔn nyinaa ayɛ bɔne.” (Rom. 5:12) Esiane sɛ Onyankopɔn ma wɔyɛɛ sɛnea nnipa asetena fii ase ho kyerɛwtohɔ nti, yebetumi ate saa asɛm yi ase. Yehowa bɔɔ nnipa baanu a wɔne Adam ne Hawa. Sɛnea Ɔbɔadeɛ no yɛ pɛ no, saa ara na na nnipa a odii kan bɔɔ wɔn a wɔyɛ yɛn nananom no nso yɛ pɛ. Ade biako pɛ na Onyankopɔn baraa wɔn sɛ ɛnsɛ sɛ wɔyɛ, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ sɛ wɔanni saa mmara no so a, wobewu. (Gen. 2:17) Nanso, wɔyɛɛ asoɔden buu Onyankopɔn akwankyerɛ a na ɛsodi nyɛ den no so ma enti wɔpoo Onyankopɔn sɛ wɔn Mmarahyɛfo ne wɔn Hene.—Deut. 32:4, 5.
6. (a) Dɛn nti na Adam asefo wuwui bere a na Onyankopɔn nnya mfaa Mose Mmara no mmae ne bere a ɔde mae no akyi? (b) Dɛn na yebetumi de atoto yare a yenya fi awo mu ho?
6 Adam bɛyɛɛ ɔbɔnefo ansa na ɔrewo mma, na ɔde bɔne ne ɔhaw a efi mu ba no woo ne mma nyinaa. Nokwarem no, Adam mma no ammu Onyankopɔn mmara so sɛnea Adam yɛe no, enti wɔammu wɔn fɔ wɔ bɔne koro no ara ho; na saa ara nso na saa bere no na wonnya mfaa mmara nsɛm biara mmae. (Gen. 2:17) Nanso, wɔde bɔne woo Adam asefo no. Enti, bɔne ne owu dii hene kosii bere a Onyankopɔn de mmara nsɛm no maa Israelfo no, na ɛno na ɛma ɛdaa adi pefee sɛ wɔyɛ abɔnefo. (Monkenkan Romafo 5:13, 14.) Yebetumi de nyarewa bi a yebetumi anya afi yɛn awofo hɔ wɔ awo mu atoto ɔhaw a efi bɔne a wɔde wo yɛn mu ba no ho. Ɛwom sɛ mmofra binom nya yare bi fi wɔn awofo hɔ wɔ awo mu de, nanso ɛnyɛ mmofra a wɔwɔ abusua no mu nyinaa na ebia wobenya saa yare no bi. Nanso, bɔne a wɔde wo de, ɛnte saa. Adam de bɔne woo yɛn nyinaa, na ɛno nti na yɛn nyinaa wuwu no. So yebetumi adi saa ɔhaw yi so da bi?
Ade a Onyankopɔn Nam Yesu Kristo So De Mae
7, 8. Ɔkwan bɛn so na nea efii mmarima baanu a wɔyɛ pɛ abrabɔ mu bae no yɛ soronko?
7 Yehowa fi ɔdɔ mu yɛɛ nsiesiei sɛnea ɛbɛyɛ a nnipa betumi adi bɔne a wonya fii awo mu no so. Paulo kyerɛkyerɛɛ mu sɛ wɔnam ɔbarima foforo a ɔyɛ pɛ a yɛbɛfrɛ no Adam a ɔto so abien so na ɛmaa eyi tumi yɛɛ yiye. (1 Kor. 15:45) Nanso, ɛsono nea afi mmarima baanu a wɔyɛ pɛ no mu biara abrabɔ mu aba koraa. Ɔkwan bɛn so?—Monkenkan Romafo 5:15, 16.
8 Paulo kyerɛwee sɛ: “Na ɛnyɛ sɛnea mfomso no te no na akyɛde no nso te.” Adam dii fɔ wɔ saa mfomso a odii no mu, na onyaa afobu a ɛfata—owui. Nanso, ɛnyɛ ɔno nkutoo na na obewu. Yɛkenkan sɛ: “Efisɛ [saa] obiakofo bɔne nti na nnipa bebree wui.” Onyankopɔn atɛntrenee hwehwɛe sɛ Adam asefo a wɔnyɛ pɛ nyinaa, a yɛn nso yɛka ho, nya atemmu koro no ara a Onyankopɔn de baa Adam so no bi. Nanso, yebetumi anya awerɛkyekye sɛ ɔbarima a ɔyɛ pɛ a ɔne Yesu no tumi ma yenyaa biribi foforo koraa. Dɛn na ɔma yenyae? Yenya ho mmuae wɔ asɛm a Paulo kae sɛ “wobu nnipa ahorow nyinaa bem ma nkwa” no mu.—Rom. 5:18.
9. Sɛnea wɔaka ho asɛm wɔ Romafo 5:16, 18 no, na dɛn na Onyankopɔn reyɛ bere a obuu nnipa bem no?
9 Dɛn na Hela nsɛmfua a wɔkyerɛɛ ase “bembu” ne ‘wobu wɔn bem ma nkwa’ no kyerɛ? Obi a ɔkyerɛ Bible ase kyerɛw faa asɛm yi ho sɛ: “Ɛyɛ kasakoa a mmaranimfo de di dwuma de kyerɛkyerɛ mmara mu. Ɛkyerɛ gyinabea a obi wɔ wɔ Onyankopɔn anim a ɛsesa, na ɛnkyerɛ sɛ onipa no ankasa asesa . . . Wɔ kasakoa no mu no, Onyankopɔn gyina hɔ sɛ ɔtemmufo a wadi obi a wɔabɔ no sobo wɔ bɔne bi ho asɛm ama no wɔ Onyankopɔn asɛnnibea. Na Onyankopɔn ma nea wɔabɔ no sobo no fa ne ho di.”
10. Dɛn na Yesu yɛe a ɛma wonyaa ade a wogyina so bu nnipa bem?
10 Dɛn na “asase nyinaa temmufo no” betumi agyina so abu ɔbɔnefo bi bem? (Gen. 18:25) Ade a edi kan a Onyankopɔn yɛe ne sɛ ofi ɔdɔ mu somaa ne Ba a ɔwoo no koro no baa asase so. Ɛmfa ho sɔhwɛ ahorow a Yesu hyiae, di a wodii ne ho fɛw pii, ne ayayade a wɔyɛɛ no no, ɔyɛɛ n’Agya apɛde pɛpɛɛpɛ. Ɔkɔɔ so kuraa ne mũdi mu kosii asɛndua ho wu mu mpo. (Heb. 2:10) Yesu nam ne desani nkwa a ɛyɛ pɛ a ɔde bɔɔ afɔre no so de agyede a ebetumi agye Adam asefo afi bɔne ne owu mu mae.—Mat. 20:28; Rom. 5:6-8.
11. Dɛn na ɛne agyede no yɛ pɛpɛɛpɛ?
11 Paulo kaa saa afɔrebɔ yi ho asɛm wɔ baabi foforo sɛ “agyede a ɛfata,” anaa sɛnea Hela kasa a wodii kan de kyerɛw Bible no kyerɛ no, agyede a ɛne nea ɛyerae no yɛ pɛpɛɛpɛ. (1 Tim. 2:6) Ná dɛn na ɛne nea ɛyerae no yɛ pɛpɛɛpɛ no? Adam de sintɔ ne owu baa nnipa ɔpepepem pii a wɔyɛ n’asefo so. Ɛyɛ nokware sɛ esiane sɛ na Yesu yɛ onipa a ɔyɛ pɛ nti, na anka obetumi anya asefo ɔpepepem pii a wɔyɛ pɛ. * Enti na ntease a yɛwɔ ne sɛ Yesu nkwa ne asefo a wɔyɛ pɛ a anka obenya nyinaa nso nkwa a ɔde bɔɔ afɔre no ne ade a Adam ne n’asefo a wɔnyɛ pɛ hweree no yɛ pɛ. Nanso, Bible nka sɛ Yesu asefo biara a anka ɔbɛwo wɔn no ka agyede no ho. Romafo 5:15-19 ka sɛ owu a “obiakofo” wui na ɛde ogye no bae. Nokwarem no, na Yesu nkwa a ɛyɛ pɛ no ne Adam de yɛ pɛ. Yesu Kristo nkutoo na ɛsɛ sɛ yɛtwe adwene si no so. “Adetrenee biako” a Yesu yɛe, osetie a ɔyɛe, ne ne mũdi mu a okura kosii owu mu no na ɛma ɛyɛɛ yiye sɛ nnipa ahorow nyinaa nya akyɛde a wɔde ma kwa ne nkwa. (2 Kor. 5:14, 15; 1 Pet. 3:18) Ɛyɛɛ dɛn na etumi yɛɛ yiye saa?
Wogyina Agyede no so Bu Wɔn Bem
12, 13. Dɛn nti na wɔn a wobu wɔn bem no hia Onyankopɔn mmɔborɔhunu ne ne dɔ?
12 Yehowa Nyankopɔn gyee agyede afɔre a ne Ba no bɔe no toom. (Heb. 9:24; 10:10, 12) Nanso, na Yesu asuafo a wɔwɔ asase so a n’asomafo anokwafo no ka ho da so ara yɛ nnipa a wɔnyɛ pɛ. Ɛwom sɛ wɔbɔɔ mmɔden sɛ wɔrenyɛ bɔne de, nanso ɛnyɛ bere nyinaa na na wotumi yɛ saa. Dɛn ntia? Efisɛ wɔwoo wɔn wɔ bɔne mu. (Rom. 7:18-20) Nanso, na Onyankopɔn betumi ayɛ ho biribi, na ɔyɛe nso. Ogyee “agyede a ɛfata,” anaa ade a ɛne nea ɛyerae no yɛ pɛ no toom, na na n’ani gye ho sɛ ɔde bedi dwuma de aboa n’asomfo.
13 Ɛnyɛ nnwuma pa bi a na asomafo no ne afoforo ayɛ nti na na ɛsɛ sɛ Onyankopɔn de agyede no di dwuma de boa wɔn. Mmom no, ɛyɛ ɔdɔ kɛse ne mmɔborɔhunu a Onyankopɔn wɔ na ɛma ɔde agyede no dii dwuma de boaa wɔn. Ɔno ankasa buu asomafo no ne afoforo bem, na obuu wɔn sɛ nnipa a wɔde bɔne a wonya fii awo mu no akyɛ wɔn. Paulo kyerɛkyerɛɛ mu pefee sɛ: “Adom yi na ama wɔnam gyidi so agye mo nkwa; na emfi mo, ɛyɛ Onyankopɔn akyɛde.”—Efe. 2:8.
14, 15. Akyɛde bɛn na Onyankopɔn de sii wɔn a wobuu wɔn bem no anim, nanso dɛn na na ɛho da so ara hia sɛ wɔyɛ?
14 Wo de, susuw sɛnea ɛyɛ akyɛde kɛse sɛ ade nyinaa so Tumfoɔ no de onipa bi bɔne a wɔde woo no ne nea ɔno ankasa ayɛ bɛkyɛ no ho hwɛ! Ɛwom sɛ worentumi nkan bɔne dodow a ankorankoro yɛe ansa na wɔrebɛyɛ Kristofo de; nanso, Onyankopɔn betumi agyina agyede no so de saa bɔne no afiri. Paulo kyerɛwee sɛ: “Akyɛde a edii bɔne pii akyi no kowiee bembu mu.” (Rom. 5:16) Ɛho behia sɛ asomafo no ne afoforo a wobenya saa akyɛde a wɔde ma wɔ ɔdɔ mu, (bem a wobu wɔn) no kɔ so som nokware Nyankopɔn no wɔ gyidi mu. Akatua bɛn na wobenya daakye? Bible ka sɛ, “Wɔn a wonya adom ne trenee akyɛde boro so no nam obiakofo no, Yesu Kristo, so bedi hene wɔ nkwa mu.” Nokwarem no, trenee akyɛde no gye wɔn fi owu mu. Akyɛde no bɛma wɔanya nkwa.—Rom. 5:17; monkenkan Luka 22:28-30.
15 Wɔn a wonya saa akyɛde no a ɛma wobu wɔn bem no ba bɛyɛ Onyankopɔn honhom mu mma. Esiane sɛ wɔne Kristo bedi ade nti, wɔwɔ anidaso sɛ wobenyan wɔn afi awufo mu akɔ soro ma wɔakɔyɛ honhom mu mma ankasa na wɔne Yesu Kristo ‘adi hene.’—Monkenkan Romafo 8:15-17, 23.
Woyi Onyankopɔn Dɔ Kyerɛ Afoforo
16. Akyɛde bɛn na wɔn a wɔwɔ anidaso sɛ wɔbɛtena asase so no betumi anya ɛnnɛ mpo?
16 Ɛnyɛ Kristofo a wodi nokware nyinaa a wonya Onyankopɔn mu gyidi na wɔsom no no na wɔhwɛ kwan sɛ wɔne Kristo “bedi hene” wɔ soro. Wɔn mu pii wɔ anidaso a egyina Bible so te sɛ nea na Onyankopɔn asomfo a wɔtenaa ase ansa na Kristo reba no wɔ no. Wɔhwɛ kwan sɛ wɔbɛtena ase wɔ paradise asase so daa. Ɛnnɛ mpo, so wobetumi anya akyɛde a Onyankopɔn de ma wɔ ɔdɔ mu no na wɔabu wɔn treneefo a wɔwɔ anidaso sɛ wɔbɛtena asase so? Asɛm a Paulo kyerɛw kɔmaa Romafo no betumi ama yɛde ahotoso aka sɛ yiw!
17, 18. (a) Esiane gyidi a Abraham nyae nti, Onyankopɔn buu no dɛn? (b) Ɛyɛɛ dɛn na Yehowa tumi buu Abraham ɔtreneeni?
17 Paulo kaa nnipa a wɔwɔ anidaso sɛ wɔbɛtena asase so no mu otitiriw biako a ɔne Abraham ho asɛm. Abraham yɛ ɔbarima a na ɔwɔ gyidi a ɔtenaa ase ansa na Yehowa de mmara nsɛm no rema Israel, ne bere tenten koraa ansa na Kristo rebue kwan ma ebinom anya anidaso sɛ wɔbɛkɔ soro. (Heb. 10:19, 20) Yɛkenkan sɛ: “Ɛnyɛ mmara so na Abraham anaa n’aseni nam nyaa bɔhyɛ sɛ obenya wiase bi sɛ agyapade, na mmom ɛnam trenee a efi gyidi mu so.” (Rom. 4:13; Yak. 2:23, 24) Enti Onyankopɔn buu Abraham a ɔyɛ ɔnokwafo no ɔtreneeni.—Monkenkan Romafo 4:20-22.
18 Yɛrentumi nka sɛ saa asɛm no kyerɛ sɛ Abraham anyɛ bɔne da wɔ mfe pii a ɔde som Yehowa no mu. Ɛnyɛ saa na ɔtreneeni a na ɔyɛ no kyerɛ. (Rom. 3:10, 23) Nanso, Yehowa nyansa a enni ano no ma osusuw gyidi soronko a na Abraham wɔ, ɛne nnwuma a ne gyidi no ma ɔyɛe no ho. Ne titiriw no, Abraham nyaa ‘aseni’ a wɔhyɛɛ ne ho bɔ a na obefi n’abusua mu aba no mu gyidi. Saa Aseni no na ɔbɛyɛɛ Mesia, anaa Kristo no. (Gen. 15:6; 22:15-18) “Kristo Yesu agyede no” nti, Onyankopɔn a ɔyɛ Ɔtemmufo no tumi de bɔne a wɔyɛe wɔ bere a atwam no firii. Enti, Abraham ne gyidifo a wɔtenaa ase ansa na Kristo reba no benya owusɔre.—Monkenkan Romafo 3:24, 25; Dw. 32:1, 2.
Ma Wommu Wo Ɔtreneeni Nnɛ
19. Dɛn nti na ɛsɛ sɛ sɛnea Onyankopɔn buu Abraham no ma nnipa pii a wɔwɔ hɔ nnɛ ani gye?
19 Ɛsɛ sɛ bu a Onyankopɔn a ɔne dɔ no buu Abraham ɔtreneeni no ma nokware Kristofo a wɔwɔ hɔ nnɛ ani gye. Yehowa ammu Abraham bem te sɛ nea obu wɔn a ɔde honhom sra wɔn ma wɔbɛyɛ “Kristo mfɛfo adedifo” bem no. “Wɔafrɛ” nnipakuw kakraa bi ‘abɛyɛ wɔn akronkronfo,’ na wɔagye wɔn atom sɛ “Onyankopɔn mma.” (Rom. 1:7; 8:14, 17, 33) Nanso, Abraham ba bɛyɛɛ “Yehowa adamfo” mpo ansa na wɔrebɔ agyede afɔre no. (Yak. 2:23; Yes. 41:8) Na nokware Kristofo a wɔhwɛ kwan sɛ wɔbɛtena ase wɔ asase so Paradise a wɔbɛsan de aba no mu no nso ɛ?
20. Dɛn na Onyankopɔn hwehwɛ fi wɔn a obu wɔn treneefo nnɛ te sɛ nea obuu Abraham no hɔ?
20 Nkurɔfo a wɔbɛtena asase so no nni ‘trenee akyɛde a ɛboro so,’ anaa akyɛde a wɔde ma kwa no a ɛbɛma wɔafa “Kristo Yesu agyede no so abu wɔn bem” ma wɔahwɛ kwan sɛ wɔbɛkɔ soro. (Rom. 3:24; 5:15, 17) Nanso, wonya Onyankopɔn ne ne nsiesiei a wayɛ no mu gyidi a ɛyɛ den, na wɔde nnwuma pa da wɔn gyidi adi. Saa nnwuma no mu biako ne ‘Onyankopɔn ahenni ho asɛm a wɔka ne Awurade Yesu Kristo ho ade a wɔkyerɛkyerɛ.’ (Aso. 28:31) Enti, Yehowa betumi abu saa nkurɔfo yi sɛ wɔyɛ treneefo te sɛ nea obuu Abraham no. Akyɛde a saa nkurɔfo yi nya a ɛne adamfo a wɔne Onyankopɔn fa no yɛ soronko wɔ “akyɛde a wɔde ma kwa” a wɔn a wɔasra wɔn no nya no ho. Nanso, akyinnye biara nni ho sɛ ɛyɛ akyɛde a wɔde anisɔ kɛse gye tom.
21. Mfaso bɛn na Yehowa dɔ ne n’atɛntrenee ma yenya?
21 Sɛ wowɔ anidaso sɛ wubenya daa nkwa wɔ asase so a, ɛsɛ sɛ wuhu sɛ saa bɔhyɛ no nte sɛ ɛbɔ a sodifo a wɔyɛ nnipa hyehyɛ a wonni so no. Mmom no, ɛma yehu Amansan Hene no atirimpɔw a nyansa wom no. Yehowa ayɛ nneɛma nkakrankakra ama n’atirimpɔw abam. Saa nneɛma a Yehowa ayɛ yi ne n’atɛntrenee ankasa hyia. Nea ɛsen saa no, saa nneɛma yi ama yɛahu Onyankopɔn dɔ kɛse. Enti, ɛfata sɛ Paulo tumi kae sɛ: “Onyankopɔn yi ne dɔ a ɔdɔ yɛn no kyerɛ, efisɛ yɛda so yɛ nnebɔneyɛfo no, Kristo wu maa yɛn.”—Rom. 5:8.
^ nky. 11 Sɛ nhwɛso no, saa adwene a ɛne sɛ na asefo ka ho bi no wɔ Insight on the Scriptures, Po 2, kratafa 736, nkyekyɛm 4 ne 5.
• Dɛn na Adam de gyaw n’asefo, na dɛn na efii mu bae?
• Ɔkwan bɛn so na wɔde agyede a ɛne nea ɛyerae no yɛ pɛpɛɛpɛ mae, na ɔkwan bɛn so na na ɛyɛ pɛpɛɛpɛ?
• Anidaso bɛn na bem a wobu yɛn no ma wunya?
Adam a ɔyɛ pɛ no yɛɛ bɔne. Ɔbarima a ɔyɛ pɛ Yesu de “agyede a ɛfata” mae
Asɛmpa bɛn ara ni—wobetumi afa Yesu so abu yɛn treneefo!
Share Share Onyankopɔn Yi Ne Dɔ Kyerɛ Yɛn
w11 6/15 kr. 11-15
So Ɛsɛ sɛ Mmabun Bɔ Asu?
Asɛmpa Bi Wɔ Hɔ A Nnipa Nyinaa Hia
So na Abraham wɔ Yoma Ankasa?
‘Fa Nhoma Mmobɔwee no, Titiriw Aboa Nhoma De no Bra’
“Monyɛn Onyankopɔn Nguankuw A Wɔhyɛ Mo Nsa No”
‘Momfa Obu Mma Wɔn A Wɔyɛ Adwumaden Wɔ Mo Mu No’
‘Ma Ensi Wo Yiye’​—Ɔkwan Bɛn So?
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM June 2011
Share Share ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM June 2011
ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM June 2011